Roman to Integer Leetcode ဖြေရှင်းချက်ရောမ Integer - TutorialCup
နွေ ဦး ရာသီ
ပင်မစာမျက်နှာ » LeetCode Solutions » Leetcode Solution မှ Integer သို့ရောမ
Leetcode Solution မှ Integer သို့ရောမ
မကြာခဏမေးတယ် Adobe က အမေဇုံ Apple ဘလွန်းဘာ့ဂ် Facebook က Goldman Sachs Google LinkedIn တို့ Microsoft က Oracle က Qualtrics Roblox Uber Yahoo က
Tags: သင်္ချာ ကြိုး
“ ရောမသို့ပေါင်းစည်းခြင်း” ပြနာတွင်၊ ကြိုး ၎င်း၏အချို့အပြုသဘောကိန်းကိုယ်စားပြု ရောမ ဂဏန်းပုံစံ။ ရောမနံပါတ်များကိုအောက်ပါဇယား သုံး၍ ကိန်းဂဏန်း ၇ ခုဖြင့်ကိန်းဂဏန်းများအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
မှတ်စု: ပေးထားသောရောမဂဏန်း၏ကိန်းသည်တန်ဖိုး ၄၀၀၀ ထက်မပိုပါ။
Leetcode Solution ကို Integer သို့ရောမ၏အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း
C ++ အစီအစဉ်
Leetcode Solution မှ Integer သို့ရောမ၏ရှုပ်ထွေးမှုအားသုံးသပ်ခြင်း
ရှင်းလင်းချက် # 1
IX သည်ကိန်း၏ ၉ ဖြစ်သည်
ရှင်းလင်းချက် # 2
CXXIX = ကို C + XX + IX = 100 + 20 +9= 129
ဘယ်ဘက်မှညာဘက်ဖြတ်သန်းသွားခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်နိုင်ပြီး၎င်းအတွင်းရှိစာလုံးတိုင်းအတွက်သက်ဆိုင်ရာတန်ဖိုးကို ဆက်၍ ထည့်နိုင်သည်။ သို့သော်၊ ကိန်းဂဏန်းများ၏ထူးခြားသောလက္ခဏာမှာမြင့်မားသောတန်ဖိုးမပေါ်မီကိန်းအနိမ့်ကျသောအက္ခရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လျှင်ရလဒ်သည်ကွဲပြားသောပေါင်းလဒ်မဟုတ်ပါ။
ဥပမာအားဖြင့်၊ အကယ်၍ စာလုံးများထပ်မံထည့်ပါက၊ ရောမပါ IX သည် 1 + 10 = 11 နှင့်ညီသည်။ အဖြစ်, IX =9အဖြစ် I အဲ့တာမတိုင်ခင် X အရေးပါသောတန်ဖိုးလျော့နည်းသည်။ ဒါကြောင့်ရလဒ်အဖြစ်ကုသသည် I နှုတ်ယူသည် X။ ထို့ကြောင့် IX =9။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် string အတွင်းရှိအက္ခရာတိုင်း၏ကိန်းတန်ဖိုးအားလုံးကိုရိုးရှင်းစွာ ထပ်၍ မထည့်နိုင်ပါ။ အထက်ဖော်ပြပါကိစ္စရပ်အတွက်စာလုံးဘေးရှိစာလုံးကိုစစ်ဆေးရန်လိုသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပေးထားသောရောမဂဏန်း string ကိုလိုအပ်သည့်ကိန်းသို့ပြောင်းနိုင်သည်။
function တစ်ခုဖန်တီးပါ getInteger () သုံးပြီးအဲဒါကိုကူးတဲ့တစ်ခုတည်းသောရောမဇာတ်ကောင်များ၏တန်ဖိုးကိုပြန်လာရန် ပွောငျးလဲ အမှုပေါင်း
စတငျ ရလဒ် လိုအပ်သောကိန်းသိုလှောင်ရန်
တနည်းကား, အစပြု ယခု နှင့် လာမယ့် သက်ဆိုင်ရာအက္ခရာများ၏လက်ရှိနှင့်နောက်ကိန်းတန်ဖိုးများ၏တန်ဖိုးကိုကြားဖြတ်တိုင်းအတွက် string တွင်သိမ်းဆည်းရန်
သည်အထိဈ =0အဘို့အကြားမှာ i <N < (N = ခင်းကျင်း၏အရွယ်အစား)
If i array ရဲ့နောက်ဆုံးအညွှန်းကိန်း၊ ကျွန်တော်တို့မှာနောက်ထပ်ဇာတ်ကောင်မရှိဘူး ကြိုး [i] ပြန်လာ ရလဒ်
သုံး၍ လက်ရှိနှင့်နောက်စာလုံးများ၏ကိန်းတန်ဖိုးကိုရယူပါ getInteger ()
If လက်ရှိ <= လာမယ့်
ပေါင်း ယခု အမှ ရလဒ်
တိုး i 1 ဖြင့်ဆိုလိုသည်မှာ i++
ပေါင်း လာမယ့် - ယခု အမှ ရလဒ်
တိုး i2ဖြင့်ဆိုလိုသည်မှာ i + = 2
int getInteger(char c)
case 'I' : return 1;
case 'V' : return 5;
case 'X' : return 10;
case 'L' : return 50;
case 'C' : return 100;
case 'D' : return 500;
case 'M' : return 1000;
default : return -1;
int romanToInt(string s)
int n = s.size() , result =0, current , next , i = 0;
while(i < n)
if(i == n - 1)
result += getInteger(s[i]);
current = getInteger(s[i]) , next = getInteger(s[i + 1]);
if(current >= next)
result += current , i++;
result += next - current , i += 2;
string s = "CXXIX";
cout << romanToInt(s) << '\_n';
static int getInteger(char c)
static int romanToInt(String s)
int n = s.length() , result =0, current , next , i = 0;
result += getInteger(s.charAt(i));
current = getInteger(s.charAt(i));
next = getInteger(s.charAt(i + 1));
result += current;
result += next - current;
ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ချိန်က string ကိုဖြတ်သန်း။ ကျွန်တော်တို့မှာကိန်းစစ်ကန့်သတ်ချက် ၄၀၀၀ ထက်နည်းတဲ့အတွက် string size ဟာအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းတန်ဖိုးဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်အချိန်ရှုပ်ထွေးသည် အို (၁).
အို (၁)၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်စဉ်ဆက်မပြတ်မှတ်ဉာဏ်အာကာသကိုသာသုံးသည်။
Right-to-left နှင့် left-to-right အကြားခြားနားချက်ကတော့သူတို့အကောင်အထည်ဖော်မှုတွင်တည်ရှိသည်။ Right-to-Left pass မှာ array ရဲ့ဒုတိယနောက်ဆုံးအညွှန်းကိန်းကနေစပြီးအချို့သော variable ထဲမှာနောက်ဆုံးစာလုံး၏ကိန်းဂဏန်းကိုသိုလှောင်ထားနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ဆုံးဇာတ်ကောင်များ၏အဓိကကျသောတန်ဖိုးကိုရလဒ်ကိုကြိုတင်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ အခုဆိုရင်ညာဘက်ကိုမှဘယ်ဘက်သို့ရွေ့လျားသွားတဲ့အခါ၊ လက်ရှိစာလုံး၏ကိန်းဂဏန်းသည်နောက်ဆုံး (ယခင် / ညာ) မြင်တွေ့ခဲ့ရသောဒြပ်စင်ထက်လျော့နည်းမနေကိုအဆင့်တိုင်းကိုစစ်ဆေးသည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်နောက်ဆုံးတန်ဖိုးထက်လျော့နည်းပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ဤတန်ဖိုးကိုရလဒ်မှနုတ်လိုက်ပါ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်ကထည့်ပါ။ ဤအကောင်အထည်ဖော်မှုသည်အထက်ပါအချက်အပေါ်အခြေခံသည်။ ပိုမိုကြီးသောတန်ဖိုးမပေးမီတန်ဖိုးသေးငယ်သည့်ဇာတ်ကောင်သည်၎င်းကိုအဆုံးတွင်နုတ်ရမည်ဟုဆိုလိုသည်။
ဤချဉ်းကပ်မှုသည်ယခင်ချဉ်းကပ်မှုနှင့်တူသောစစ်ဆင်ရေးအရေအတွက်နှင့်အတူတူနီးပါးဖြစ်သော်လည်းနောက်ဆုံးကြားဖြတ်ချက်အတွက်စစ်ဆေးရန်ဖယ်ထုတ်လိုက်သည်နှင့် ပို၍ အဆင်ပြေသည်။
function တစ်ခုဖန်တီးပါ getInteger () အထက်တွင်ကဲ့သို့ဆင်တူသည်
string ၏နောက်ဆုံးအက္ခရာ၏ integer တန်ဖိုးကိုသိမ်းထားပါ prev
စတငျ ရလဒ် ညီမျှသည် prev
မှဖြတ် i = N -2မှီတိုငျအောငျ i> = 0:
If ယခု ထက်နည်းသည် prev
နုတ်ပါ ယခု မှ ရလဒ်ဆိုလိုသည်မှာ ရလဒ် -= ယခု
ပေါင်း ယခု သို့ ရလဒ်ဆိုလိုသည်မှာ ရလဒ် += ယခု
int n = s.size();
int prev = getInteger(s[n - 1]) , result = prev , current;
for(int i = n -2; i >=0; i--)
current = getInteger(s[i]);
if(current < prev)
result -= current;
prev = current;
int n = s.length();
int prev = getInteger(s.charAt(n - 1)) , result = prev , current;
တနည်းကား, ကျနော်တို့တစ်ချိန်က string ကိုဖြတ်သန်း။ အထက်တွင်ဆွေးနွေးထားသည့်အတိုင်းအချိန်ရှုပ်ထွေးသည် အို (၁).
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား LeetCode Solutions Tags: Adobe က, အမေဇုံ, Apple, ဘလွန်းဘာ့ဂ်, လွယ်ကူသော, Facebook က, Goldman Sachs, Google, LinkedIn တို့, သင်္ချာ, Microsoft က, Oracle က, Qualtrics, Roblox, ကြိုး, Uber, Yahoo က post navigation
N-th Tribonacci နံပါတ် Leetcode ဖြေရှင်းချက်
String Leetcode Solution ၏သရအက္ခရာများ
© TutorialCup 2021 | feeds | ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပေါ်လစီ | စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ | ဆက်သွယ်ရန် | linkedin | ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း